EMERGENCE MADAGASCAR : Ela vao misy fiantraikany ny PND, vonona...
Home ECONOMIE EMERGENCE MADAGASCAR : Ela vao misy fiantraikany ny PND, vonona hifanome tanana izy ireo raha misy ny ilàna azy.
EMERGENCE MADAGASCAR : Ela vao misy fiantraikany ny PND, vonona hifanome tanana izy ireo raha misy ny ilàna azy.
By Nirinafév 08, 2015, 17:07 0
Tsy mifaninana na manaloka ny drafim-panjakana nasionaly ho amin’ny fampandrosoana, na ny PND ny émergence de Madagascar, hoy ny filohany, Atoa RABAONARIJAONA Holijaona. Efa nandroso izany fandaharan’asan’ny Emergence izany, fony izy mpanolo-tsainan’ny primatiora, tamin’ny praiministra teo aloha Dr KOLO Roger izy. Tsy tafita anefa ny hafatra satria nisy ny fialàny an-daharana tao an-dapa taty aoriana, ka tsy tonga tamin’ny tanjona nametrahana sy nampiharana azy, io rafitra vaovao izay hitondra fampandrosoana sy hanova ny lafiny ara-toekarena io. Efa maro ireo firenena mivondrona ao anatin’ny Emergence ary efa manana ny tanjaka ara-toe-karena amin’izao fotoana izao. Mila miala amin’ny lova tamin’ny andron’ny fanjanahan-tany isika, hoy hatrany izy, izay mindram-bola foana ary tsy maintsy averina. Ny fidirana ao anatin’ny PND dia mbola ho elaela ihany vao hisy fiantraikany amin’ny lafiny fampandroasona raha ny nambarany. Ho azy ireo kosa indray, dia teknika marim-pototra sy maty paika sady haingana no hanatanterahany izany, miaraka amin’ny mpampiasa vola avy any ivelany. Ho an’ny fomba fijery Emergence, rehefa hametraka foto-drafitr’asa iray dia miara-miasa amin’ny fanjakana ny mpampiasa vola mandritra ny taona maromaro dia averiny amin’ny fanjakana izany rehefa tapitra ny fifanarahana. Maro ny antony tsy naha-tafapetraka ny fandaharan’asa Emergence eto, hoy izy, ny fisafidianan’ny mpitondra fandaharan’asa hafa, sakana ihany koa ny fisian’ireo mpandraharaha ara-toe-karena Malagasy sy mpanao politika tsy mankasitraka ny Emergence. Farany dia ny tsy fahampian’ny fampahafantarana ny fisian’izany manerana ny faritra maro eto Madagasikara. Vonona hifanome tanana ho amin’izany firosoana ho amin’ny fampandrosoana izany izy ireo raha misy ny ilàna azy amin’izao fitondrana mijoro izao. Marihana fa nandika sy naneho hevitra tamin’ ny teny angilisy Andriamatoa Harijaona RABAONARIJAONA izay tanora » emergence » tamin’ ity fandaharana manokana ity.
INTERVIEW: RABAONARIJAONA Holijaona ( filohan’ ny Emergence de Madagascar ), Harijaona RABAONARIJAONA (Tanora Emergence )
[image_slider link= »http://canalnews.net/wp-content/uploads/2015/02/RABAONARIJAONA-HOLIJAONA-1.jpg » source= »http://canalnews.net/wp-content/uploads/2015/02/RABAONARIJAONA-HOLIJAONA-1.jpg »] RABAONARIJAONA HOLIJAONA EMERGENCE [/image_slider]
[image_slider link= »http://canalnews.net/wp-content/uploads/2015/02/RABAONARIJAONA-HOLIJAONA-2.jpg » source= »http://canalnews.net/wp-content/uploads/2015/02/RABAONARIJAONA-HOLIJAONA-2.jpg »] RABAONARIJAONA HOLIJAONA EMERGENCE [/image_slider]
[image_slider link= »http://canalnews.net/wp-content/uploads/2015/02/RABAONARIJAONA-HOLIJAONA-3.jpg » source= »http://canalnews.net/wp-content/uploads/2015/02/RABAONARIJAONA-HOLIJAONA-3.jpg »] RABAONARIJAONA HOLIJAONA EMERGENCE [/image_slider]
[image_slider link= »http://canalnews.net/wp-content/uploads/2015/02/RABAONARIJAONA-HOLIJAONA-4.jpg » source= »http://canalnews.net/wp-content/uploads/2015/02/RABAONARIJAONA-HOLIJAONA-4.jpg »] RABAONARIJAONA HOLIJAONA EMERGENCE [/image_slider]
[image_slider link= »http://canalnews.net/wp-content/uploads/2015/02/RABAONARIJAONA-HOLIJAONA-5.jpg » source= »http://canalnews.net/wp-content/uploads/2015/02/RABAONARIJAONA-HOLIJAONA-5.jpg »] RABAONARIJAONA HOLIJAONA EMERGENCE [/image_slider]
[image_slider link= »http://canalnews.net/wp-content/uploads/2015/02/RABAONARIJAONA-HOLIJAONA-6.jpg » source= »http://canalnews.net/wp-content/uploads/2015/02/RABAONARIJAONA-HOLIJAONA-6.jpg »] RABAONARIJAONA HOLIJAONA EMERGENCE [/image_slider]
[image_slider link= »http://canalnews.net/wp-content/uploads/2015/02/RABAONARIJAONA-HOLIJAONA-7.jpg » source= »http://canalnews.net/wp-content/uploads/2015/02/RABAONARIJAONA-HOLIJAONA-7.jpg »] RABAONARIJAONA HOLIJAONA EMERGENCE [/image_slider]
TAGEMERGENCE EMERGENCE DE MADAGASCAR Harijaona RABAONARIJAONA madagascar PND RABAONARIJAONA Holijaona
Previous PostEMISSION : Dr FEZINY Séraphine , Ireo tombontsoa azo avy amin’ny fihinanana spiruline. Next PostTELETHON : Nanolotra izay voa-tsirambin’ ny tanana ny fikambanana HAFARI Malagasy
GRANDE BRADERIE DE MADAGASCAR : Maro ireo entana azo atao fanomezana ho an’ ny reny
ASA FANAOVAN-GAZETY : Nasaina teny Iavoloha haka vaovao kanefa nahilika sy natao tsinontsinona.